merolagani - स्वास्थ्य बीमाकाे प्रगति ११ प्रतिशत,बाँकी २.५ बर्षमा शत प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य मेल नखाने निश्चित
स्वास्थ्य बीमाकाे प्रगति ११ प्रतिशत,बाँकी २.५ बर्षमा शत प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य मेल नखाने निश्चित
Jan 11, 2021 11:53 AM Merolagani
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तारमा सुस्तता छाउँदा सरकारको लक्ष्य समेत नभेटिने देखिएकाे छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा सुरू गरेकाे पाँच वर्ष पुग्न लागेकाे छ । तर याे अवधिमा साढे ११ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र स्वास्थ्य बीमा पुगेकाले पनि सरकारले राखेकाे लक्ष्य भेट्याउन सम्भव नदेखिएकाे हाे ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दै आगामी ३ वर्ष भित्र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा समेटिने लक्ष्य राखेको छ । २०७२ सालमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा सुरू भएकाे यस कार्यक्रमले पाँच वर्ष पुरा गरेकाे छ । तर २०७५ सालबाट मात्रै याे कार्यक्रम औपचारिक रूपमा संचालनमा आएकाे हाे । यस अवधीमा साढे ११ प्रतिशत जनतामा मात्र स्वास्थ्य बीमा पुग्न सकेकाे छ।
अबकाे साढे २ बर्षमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुग्न बाँकी साढे ८८ प्रतिशत जनतामा स्वास्थ्य बीमा पुग्न सक्ने नदेखिएकाे हाे ।
कछुवा गतिमा यसरी नै सुस्त गतिमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढे सरकारको लक्ष्य पुरा नहुने प्रष्ट देखिन्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार हालसम्म ३४ लाख ५२ हजार ४१२ जना स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । केन्द्रिय तथ्यांक विभागको अनुसार हाल नेपालमा कुल ३ करोड २० लाख जनसंख्या छन् । त्यसको आधारमा बल्ल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले ११.४३ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै समेटिएका हुन् ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार विविध कारणले ढिलाई हुदाँ बल्ल करिब साढे ११ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै पुगेकाे सरकारी भनाइ छ ।
यता, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बस्यालले भने सरकारको लक्ष्य अनुसार नै काम भइरहेको दाबी गर्छन् । अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरुवाती चरणमै छ । हामीले सरकारको लक्ष्य पुरा हुने गरी कार्यक्रम विस्तार गरिरहेका छौ । तत्काल हामी जिल्ला विस्तारका काममा लागेका छौं । उनले भने, हाल सम्म ६२ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार भएको छ । पुस मसान्त भित्र थप तीन जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गर्दैछौं ।
जिल्ला विस्तारको योजना सकिएपछि कार्यक्रममा आवद्धता गराउन बोर्डले अभियान चलाउने तयारी थालेको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा निण्न्त्रण गर्न सरकारले लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारणपनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तारमा केहि अवरोध पुगेको उनको भनाई छ ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट घोषण गर्दै आगामी तीन वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा पुर्याउने बताएका थिए ।
सरकारले अति गरिब र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाहिर रहेका वर्गलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले विशेष जोड दिएको छ । गरिबी निवारण कोषबाट प्रमाणपत्र प्राप्त भएका अति गरिबहरू निशुल्क बीमा कार्यक्रममा समेटिने क्रम तीब्र गतिमा पनि बोर्डले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के हो ?
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तरगत आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन, स्वास्थ्य सेवा उपयोगका क्रममा भइरहेको व्यक्तिगत खर्चलाई ब्यवस्थित गर्दै उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी र दक्ष तथा जिम्मेवार व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।
सम्पूर्ण जनतालाई सहज रूपमा स्वाथ्य उपचार पाउन र कुनै पनि नागरिकलाई सामान्य रोगदेखि मुटु, मृगौला, क्यान्सर लगायतका कडा रोग तथा अन्य उपचारमा सहायता होस भन्ने उदेश्यले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गरेको हो ।
यसबाट महंगो र अत्यावश्यक सबै उपचार सेवालाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने, जनताले स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्दा ठूलो आर्थिक बोझ व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने र नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने सरकारको विश्वास छ ।
बीमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट ओपीडी, इमर्जेन्सी, ल्याब उपचार, सामान्य अपरेशनलगायतका उपचार खर्च बापत एक लाख रुपैयाँसम्मको सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधी समेत प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
तर, कस्मेटिक सर्जरी, व्यक्तिगत झै झगडाका कारण चोटपटक लागेमा, मादक पदार्थ सेवनका कारण कुनै दुर्घटनामा परि चोट पटक लागेमा, गर्भपतन गरेमा भने यो सेवा पाउने छैन । यस्ता उपचारलाई बीमाले समेट्दैन ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा कसरी आवद्ध हुने ?
यस कार्यक्रमा सबै उमेर समुहका व्यक्ति सदस्य बन्न पाउने छन । कार्यक्रममा आवद्ध हुन चाहने पाँच जनासम्मको परिवारले बीमा शुल्क वापत प्रति परिबार प्रत्येक वर्ष ३ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । पाँच जना भन्दा बढी जतिसुकै सदस्य भए प्रति सदस्यले ७०० रुपैयाँका दरले थप शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
बीमा रकम तिर्न नसक्ने विपन्न वर्गको हकमा भने सरकारले नै बीमा रकम वापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अन्तर्गत सरकारले अति विपन्न नागरिकलाई शत प्रतिशत, विपन्नलाई ७५ प्रतिशत तथा गरीबीको रेखा मुनि रहेका नागरिकलाई ५० प्रतिशतका दरले बीमा शुल्क बापतको रकम तिरि दिने व्यवस्था छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकको अधिकांश सूचकमा सुधार
Jan 21, 2021 07:42 AM
मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड (MNBBL) ले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सो अवधिसम्ममा बैंकको अधिकांश सुचकमा सुधार भएको विवरणमा देखिएको छ।
सिटिजन्स बैंकको नाफा २७ प्रतिशत बढ्यो, प्रतिशेयर आम्दानी कति?
Jan 21, 2021 07:08 AM